पार्टीभित्र विवाद र समस्या छैन : राजेन्द्र श्रेष्ठ « रिपोर्टर्स नेपाल
पार्टीभित्र विवाद र समस्या छैन : राजेन्द्र श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति : 2020 September 17, 6:58 pm
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीभित्र कुनै खालको विवाद र समस्या नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेताहरुको पदीय व्यवस्थापन अझैसम्म पनि भएन ? विवाद नै विवाद छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ? भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले भनेका छन्,‘खोई कसरी आयो ? मलाई त थाहा छैन । पहिलो दिनमा जे घटनाहरू घटेका थिए, त्यसमा समस्याको रूपमा देखा परेको हो, दर्ताकै दिनमा । त्यतिबेला हामीले एक किसिमले व्यवस्थापन गरेका छौँ । अरू व्यवस्थापनका कुराहरू समायोजन सँगसँगै अगाडि जान्छ । अहिले त्यस्तो कुनै विवादहरू देखिएको छैन ।’ प्रस्तुत छ नेता श्रेष्ठसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईको पार्टी किन विवादमा छ ? किन कुरा मिलेन, नेताहरूको बीचमा ?
पार्टीभित्र त्यस्तो खालको कुनै विवाद र समस्या देखा परेको छैन ।
होइन, एकीकरण भएको छ महिना नाघिसक्यो तर तपाईहरूले केही गर्न सक्नुभएन ? संस्थागत हुन सकेन पार्टी ?
होइन, अहिलेसम्म संस्थागत नै छ, हाम्रो पार्टी । ४ ओटा बैठक सम्पन्न भयो । पहिलो बैठकमा हामीले केन्द्रिय कार्यसमितिमा छलफल गरेका छौँ । हामी दर्ताका लागि गयौँ । साथीहरूको कुराबाट हामीले योजना बनायौँ । यसो हो, बैठकबाट हामीले केही कुरामा निर्णय गरेका छौँ । चौथो बैठकबाट हामीले लामो बैठक बसेर पार्टीको आचारसंहिता, निर्देशिका, आजको संघर्षको दिशा, राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावहरू कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर छलफल भयो । त्यसै निर्देशिका अनुसार तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको समायोजनका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दै अहिले भटाभट गाउँस्तरमा नै वडास्तरमा समायोजनका कामहरू भईरहेको छ । जस्तो अब ताप्लेजुङ, हुम्लामा जिल्लास्तरमा समायोजन भयो । लखनपुर लयायतका २० देखि २५ वडाहरूमा र गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा समायोजन भयो । यसरी हामी आफैले कोभिडका कारणले एक ठाउँमा जुट्न सम्भव भईरहेको छैन ।
तपाईहरू साँच्चै एक भएर जानुहुन्छ कि त्यसमा फेरि पनि समस्याहरू आउँछन् ?
अहिले त केही समस्या आएको त्यस्तो केही पनि छैन ।
नेताहरू मिलेका छैनन् । सबैलाई पद चाहिएको छ । तपाईको पार्टीभित्र बाबुराम भट्टराईलाई अझै पनि तपाइहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँको असहमति बाहिर आईसक्यो त ?
खोई कसरी आयो ? मलाई त थाहा छैन । पहिलो दिनमा जे घटनाहरू घटेका थिए, त्यसमा समस्याको रूपमा देखा परेको हो, दर्ताकै दिनमा । त्यतिबेला हामीले एक किसिमले व्यवस्थापन गरेका छौँ । अरू व्यवस्थापनका कुराहरू समायोजन सँगसँगै अगाडि जान्छ । अहिले त्यस्तो कुनै विवादहरू देखिएको छैन ।
तर पनि प्रदेशमा सरकार, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ, नयाँ मुख्यमन्त्री ल्याउनुपर्छ, नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने बहस त सुरु भयो नि अब ?
होइन त्यो बेमौसमको बाजा हो । अहिले मुख्य कुरा के हो भने २ नम्बर प्रदेश समायोजन भएको छैन । सबैभन्दा पहिला २ नम्बर प्रदेश समायोजन हुनुपर्छ । २ नम्बर प्रदेश समायोजन भईसकेपछि प्रदेश समितिको रोहबरमा संसदीय दल एकीकरण हुन्छ । हामीले केन्द्रमा सँगसँगै दल एकीकरणका लागि हामीले संघीय संसदमा दिईसकेका छौँ । उहाँहरूले त्यो कुरालाई फाइनल्ली दिएपछि हामी अगाडि जान्छौँ । त्यस्तै त्यसको त प्रक्रिया हुन्छ नि त । पहिला प्रदेश एकीकरण हुनुपर्छ । प्रदेश एकीकरणको काम सकिएपछि संसदीय दलको एकीकरणको लागि उहाँहरूले प्रादेशिक संसदको कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुहुन्छ । त्यहाँबाट संसदीय दल एकीकरण भएको जानकारी दिएपछि त्यहाँबाट संसदीय दलको नेता चयन हुन्छ । संसदीय दलको नेता चयन हुनका लागि सबैभन्दा पहिले प्रदेशको समायोजन हुनुपर्छ । त्यो भएकै छैन ।
त्यसोभए मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदैन, प्रदेश नम्बर २ मा अब ?
अहिले मुख्यमन्त्रीको परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस नै छैन । एकीकरणमा अगाडि बढ्ने हो अहिले ।
तर नयाँ प्रक्रिया र विधिमा जानुपर्छ नि त अब त ?
नयाँ प्रक्रियामा त जान्छौँ नि । दलको नेता कसलाई बनाृउने भन्ने हुन्छ ।
को हुन्छ त नेता अब ?
त्यो त एकीकरणपछि नै थाहा हुन्छ । अहिले हामीले यो वा त्यो भनेर चयन गरिसकेका छैनौँ । त्यो त सांसदहरूको आन्तरिक मामिला हो ।
यहाँ तत्कालिन नेकपा एमालेमा लामो समय बसेर काम गरेको नेता हुनुहुन्छ, अहिले नेकपाभित्रको विवाद मिलेको जस्तो लाग्छ ? यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अब यस्तो हो, बम पनि विस्फोट हुनुभन्दा अगाडि शान्त भएर नै देखापर्छ । कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक स्थितिको कसरी समाधान हुन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले नै आइसब्रेक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्दछ । मलाई लाग्छ, त्यो अस्थायी युद्धविरामभन्दा केही पनि होइन ।
त्यसो भए दीर्घकालीन रूपमा नेकपा एक भएर जान सक्दैन त ?
वैचारिक राजनीतिक ढंगले नयाँ-नयाँ ध्रुवीकरणहरू देखा पर्छन् भन्ने लाग्छ । तर अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त्यो हेर्न बाँकी छ । कतिपय कुराहरू प्राकृतिक देखिँदैन । नेपालको राजनीतिमा अहिले धेरै जसो ध्रुविकरण र एकीकरण भन्ने कुरा चुनाव अगाडि र स्वार्थका लागि हुने गरिएको देखिन्छ । त्यहाँ वैचारिक बहसहरू अहिलेपनि टुँगिएको छैन् । अहिलेपनि जनताको बहुदलीय जनवाद कि २१औं शताब्दीको जनवाद जस्ता म्याद नाघेका विवादहरु हुने गर्दछन् । बास्तवमा अब समाजवादको मोडेलबारे बहस हुनुपर्दछ । तर, त्यसो भएको देखिँदैन् ।
नेकपाको एकता महाधिवेशन आउने चैत्रमै हुन्छ भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
नेकपाका साथीहरुले चैत्रमै महाधिवेशन गर्ने भनेर भनिरहेका छन् । तर, अहिलेको विश्वव्यापी कोरोना महामारीको संकटले त्यो सम्भव देखिँदैन् । यो प्रसँग नै वास्तवमा पार्टीभित्रको विवादको अस्थायी समाधानको हिसाबले आएको प्रष्ट हुन्छ । महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि कसले कसलाई धोका दिने हो ? त्यो भने हेर्न अझै बाँकी छ । नेकपाले खासगरी सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरुले हामीसँग संविधान संशोधनलगायतका दुई बुँदे सहमति गर्दा पनि धोका दिएको ईतिहास छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाभित्र झनै शक्तिशाली बन्नुभयो भन्ने चर्चा छ नि ?
त्यसैले त मैले भनिरहेको छु नि-त्यहाँ अब संघर्ष र एकता पनि होला । तर, त्यसमा धोका र विश्वासघात पनि जोडियो । त्यसैले नै मैले अस्थायी युद्धविराम भनेको हो । नेकपाभित्रको विवाद समाधान भनेर जसरी हल्ला चलिरहेको छ, त्यो चाहीँ अस्थायीमात्रै हो ।